नारीहरु धेरै आकर्षित हुने यौन आसनहरु यस्ता छन्, यी कुराहरुले तपाँइलाई पनि आश्चर्यमा पार्न सक्छ - Gokarna News
नारीहरु धेरै आकर्षित हुने यौन आसनहरु यस्ता छन्, यी कुराहरुले तपाँइलाई पनि आश्चर्यमा पार्न सक्छ
एजेन्सी– यौनका विषयमा नेपाली समाजले अझै पनि लुकिछिपी चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । यौनका कुरा अलि अपच हुने हुँदा यसका विषयमा चर्चा र चासो कम देखाउने गरिन्छ । तर पनि लुकिछिपी सबैले यस तर्फ ध्यान दिएकै हुन्छन् । त्यसैले यौनका विषयमा खुल्लारुपमा चिन्तन कम हुने गरेको छ । संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक चीज यौनलाई नै मानिन्छ । त्यसैले पनि यौन सधैं चर्चाको शिखरमा रहन्छ ।
यौन जीवनलाई अझ आनन्दायक बनाउन यसका आसनको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले यौन जीवनलाई सुखद बनाउन विभिन्न शैली, पोजिसन, पहिरन, बेड, स्थानजस्ता कुराको पनि विशेष ख्याल गरिन्छ । यौन साथीको भावना बुझेर यौन सम्पर्क राख्नुपर्छ । महिलालाई सबैभन्दा बढी आनन्द यौन आसन के के हुन् त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । केही यौन आसनका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
डग पोजिसनः डग पोजिसनमा महिलाले सबैभन्दा बढी आनन्द पाउँने हुदा यो पोजिसनमा सेक्स गर्न उनीहरू एकदमै लालायित हुने गर्छन् । यसलाई सर्वाधिक लोकप्रिय सेक्स पोजिसन पनि मानिन्छ । प्रायः महिलाले आफ्नो पुरुष साथीले यही पोजिसनमा सेक्स गरोस् भन्ने चाहना राख्छन् ।
काउगर्ल पोजिसनः महिलाहरूले रुचाउने अर्को प्रमुख सेक्स पोजिसन भनेको काउगर्ल पोजिसन हो । यो पोजिसनमा सेक्स गर्न रुचाउने महिलाहरूले आक्रामक सेक्स चाहान्छन् । यो पोजिसनलाई सबैभन्दा सेक्सी पोजिसन पनि भनिन्छ । यो पोजिसनमा सेक्स गर्दा पूर्णतया महिलाको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । यो पोजिसनमा पुरुषमाथि महिला रहेर गरिन्छ अर्थात् पुरुष तल हुन्छन् ।
मिसिनरी पोजिसनः यो पनि महिलाहरूले रुचाउने प्रमुख पोजिसन अन्र्तगत रहेको छ । प्रायः सबै यौनजन्य क्रियाकलाप यही पोजिसनबाट सुरु गरिने मान्यता रहेको छ । यो पोजिसनमा आँखामा आँखा जु्धाउँदा महिलाहरू बढी आकर्षित हुने गर्छन भनिन्छ ।
स्पुन्स पोजिसनः यो पोजिसनमा सेक्स गर्दा लामो समयसम्म यौनक्रीडामा सहभागी हुन सकिने विश्वास रहेको हँदा महिला धेरै आकर्षित भएको पाइन्छ । यो पोजिसनमा यौनसाथीहरू एक अर्काको साइडमा चम्चा खप्टिएझैं गरी सेक्स क्रियाकलाप गर्छन् ।
स्ट्यान्डिङ पोजिसनः यस पोजिसनमा यौनसाथीहरू दुवै जना उठेर यौन सम्पर्क गर्छन् । महिला उठेर भित्तातिर र्फकने र पुरुष पछाडि हुने यो पोजिसनबाट पनि महिलाले बढी सन्तुष्टि पाउछन् । त्यसैले यो पोजिसनमा पनि धेरै महिलाले आकर्षित हुने गर्छन् ।
सेक्स र महिलासँग सम्बन्धित केहि यस्ता कुरा जसले तपाईलाई आश्चर्यमा पार्न सक्छ – अमेरिकाको एक कलेजमा गरिएको अध्ययन रिपोर्टमा महिलाहरुका बारेमा केहि आश्चर्यजनक तथ्यहरु सार्वजनिक गरिएको छ । जानौँ त्यो तथ्यको बारेमा‘ यो रिसर्च अमेरिकाको एक कलेजमा अध्ययनरत २८३ जना छात्राहरुमाथि गरिएको छ । उनीहरुको उमेर १८ देखि २५ को बीचमा थियो । उनीहरुसँग सुत्ने, खाने–पिउने र सेक्सको बारेमा अध्ययनका लागि सोधिएको थियो ।
यदि तपाईलाई लाग्छ कि पुरुषहरु मात्र सेक्सको बारेमा सोच्छन् भने तपाई महिलाहरुलाई त्यस विषयमा कम मूल्याकंन गर्दै हुनुहुन्छ । अध्ययनका अनुसार महिलाहरु सेक्सको बारेमा धेरै सोच्छन् । अध्ययनका लागि छात्राहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो, जब तपाईँलाई सेक्स सँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा मनमा आउँछ भने त्यसलाई नोटको रुपमा टिपोट गरेर राख्नुहोला ।
रिसर्च रिपोर्टका अनुसार महिलाहरु दिन भरमा कम से कम २८ पटक सेक्सको बारेमा सोच्ने गर्छिन् । यो अध्ययनबाट, निष्कर्ष निकालियो पुरुष एक दिनमा लगभग ३४ पटक सेक्सको बारेमा सोच्छन् । सेक्समाथि गरिएको एक अर्को अध्ययनका अनुुसार महिलाहरु सेक्सको बेला आप्mनो पूर्व प्रेमी वा निलो चलचित्रको बारेमा पनि सोच्ने गर्छिन् ।
जहाँ समाचारवाचीका टेलिभिजनमा ‘ब्रा’ खोलेर समाचार पढ्छिन्(भिडियो हेर्नुहोस्)
श्रीमानले यौन सम्बन्ध राख्न नसकेको भन्दै डाक्टर प्रियाले गरिन आत्माहत्या!
कति मिनेटको यौनसम्बन्धमा मिल्छ पूर्ण सन्तुष्टि ?
सिंहदरवारमा धमलामाथि प्रधानमन्त्रीको हमला !(भिडियो हेर्नुहोस्)
युवतीलाई यौनसम्पर्क गर्नका लागि कसरी फकाउने ?
यौन सम्पर्क अघि के–के नखाने ?